NOOK GlowLight3တတိယအကြိမ်အနိုင်ရပါသလား။ | eReaders အားလုံး
NOOK GlowLight3တတိယအကြိမ်အနိုင်ရပါသလား။
Joaquín Garcia က | | Barnes & Noble, စာဖတ်သူများ
Amazon သည် Kindle Oasis ပုံစံသစ်ကိုမည်သို့စတင်ခဲ့သည်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ပြီး Bq သည် Cervantes ကိုအဆင့်မြှင့်ခဲ့ပြီး European Tolino ပင်မျက်နှာပြင်ကြီး eReader ကိုစတင်ခဲ့သော်လည်း၎င်းတို့သည်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။
Barnes & Noble သည် Nook Glowlight3ထုတ်ကုန်သစ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့ပြန်လည်အသုံးပြုထားသောတက်ဘလက်မဟုတ်သော်လည်း eReader၊ စျေးကွက်ထဲတွင်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများပါသော eReader ဖြစ်သည်။
Nook GlowLight3သည်၎င်း၏သေးငယ်သည့် screen eReader, Nook Glowlight ၏အဆက်ဖြစ်သည်။ ဒီစက်၏နောက်ဆုံးထုတ်မော်ဒယ်ကို ၂ ဝ ၁၅ ခုနှစ်တွင်စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ မော်ဒယ်နှင့်မော်ဒယ်အကြားနှစ်နှစ်ဖြစ်သည်။ စာအုပ်ဆိုင်ဟောင်းသည်နေရာများနှင့်မကြာမီကရရှိခဲ့သောအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ကြုံတွေ့ရသောပြproblemsနာများကြောင့်အချိန်ကုန်သက်သာခဲ့သည်။
The Nook Glowlight3သည်မျက်နှာပြင်သေးငယ်သည့် eReader တစ်ခုဖြစ်သည်။ E-Ink နည်းပညာနှင့်အတူလက်မ6လက်မ နှင့်ယခင်မော်ဒယ်များမှလေးစားမှုနှင့်အတူအခြားပြိုင်ဘက် devices များမှလေးစားမှုနှင့်အတူချိန်ညှိပုံစံ။ တစ်ဦးကဦး, eReader အသစ်သည်အခြားကိရိယာများထက်ပိုမိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပုံရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုတစ်လက်ဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည်၊ လည်း Kindle အိုအေစစ်၌ဖြစ်ပျက်ကြောင်းအရာတစ်ခုခု။
သို့သော်ဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့အတည်မပြုနိုင်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ယခုအချိန်တွင်ကြိုတင်မှာကြားထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိရိယာကိုရောင်းချခြင်းမပြုရသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကိရိယာ၏တိုင်းတာမှုများမှာ - ၁၇.၆၀ x ၁၂.၇ x ၀.၉၆ စင်တီမီတာ။ အခြား eReaders နှင့်မတူသည်မှာ Nook GlowLight3မှာစာမျက်နှာကိုဖွင့်ဖို့နှစ်ဖက်စလုံးမှာခလုတ်တစ်ခုရှိနေသေးတယ်.
မျက်နှာပြင်နှင့်စပ်လျဉ်း။ B&N eReader အသစ်တွင် Carta HD နည်းပညာ၊ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်နှင့်နောက်ခံအလင်းပါသောမျက်နှာပြင်တစ်ခုရှိသည်။ ၏ဆုံးဖြတ်ချက် မျက်နှာပြင်သည် 1430 x 1080 pixels နှင့် 300 dpi ဖြစ်သည်။ အခြား eReaders များနည်းတူ Nook GlowLight3တွင်အပြာရောင်မီးစစ်စစ်စက်ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ညအချိန်၌ဤ mode ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားနိုင်ပြီးပြanyနာမရှိဘဲဖတ်နိုင်သည်။ ဤ eReader ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းထိတွေ့နိုင်သောကြောင့်ခလုတ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ လက်ချောင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်းစာမျက်နှာကိုလှည့်နိုင်သည်။
Nook GlowLight3မှာစာမျက်နှာကိုဖွင့်ဖို့ဘေးထွက်ခလုတ်တစ်ခုကျန်နေသေးတယ်
ဤ eReader အသစ်၏ပရိုဆက်ဆာမှာ Freescale ဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့် iMX6to 1 Ghz မော်ဒယ်လ်သည် ram 512 Mb နှင့် 8 Gb internal storage ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် 6,5 Gb ရရှိနိုင်သည်။ Nook GlowLight3တွင် microsd ကတ်များအတွက်ကဒ်ပြားမရှိပါ.
B&N eReader အသစ်တွင် Amazon Kindle ကဲ့သို့ 3G ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ။ သို့သော်၎င်းတွင် ၀ ိုင်ဖိုင်ချိတ်ဆက်မှုရှိပါကသင် ebooks ၀ ယ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းနိုင်သည်၊ microusb ဆိပ်ကမ်းကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်၎င်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ B&N စတိုးများ၌ရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်လိမ့်မည် အခမဲ့ hotspot ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။
ဒီကိရိယာကလုပ်နိုင်တယ် epub, pdf, ebook များနှင့် DRM format ကိုဖတ်ပါ နှင့်ပုံစံများ: JPG, GIF, PNG နှင့် BMP ။ ၎င်းတို့သည်အွန်လိုင်းစာအုပ်ဆိုင်အားလုံးနှင့်မကိုက်ညီသော်လည်း၎င်းတို့သည်စာဖတ်သူလိုအပ်သည့်အခြေခံနှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပုံစံများရှိသည်။
ဒီကိရိယာ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သည်ရက်ပေါင်း ၅၀ အထိရှိသည်။ 1.500 mAh ထက်ပိုသောဘက္ထရီမှရရှိသောမြင့်မားသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုရရှိသည်သို့မဟုတ်၎င်းသည်ဘက်ထရီ၏မီလီဂမ်များ၏အချက်အလက်များကိုမထုတ်ပြန်သေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Nook Glowlight3၏စျေးနှုန်းသည်ဒေါ်လာ ၁၁၉ ဖြစ်သည်Kindle Paperwhite ကဲ့သို့စျေးနှုန်းသည်၎င်းနှင့်တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စက်ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။ eReader ကိုမ ၀ ယ်နိုင်သေးပါ၊ သို့သော်ဤလကုန်တွင်ခရစ်စမတ်လှုပ်ရှားမှုအစတွင်စတင်သောအခါ၎င်းအတွက်ကြိုတင်မှာယူနိုင်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုနားလည်ရန်အနည်းငယ်ခက်ခဲသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် eReader သည်သုံးစွဲသူများမျှော်လင့်ထားသည့်အရာများမဟုတ်ဘဲမော်ဒယ်များလည်း ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ အဆိုပါ Kindle Paperwhite သို့မဟုတ် Kobo Aura Edition ကို 2.
အကွောငျး စျေးနှုန်း / အရည်အသွေးအချိုးအစားအရ Nook သစ်သည်အတော်လေးယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည်Kindle Paperwhite နှင့် Kobo Aura Edition ၂ တို့ကိုဖန်တီးသူများအတွက်အရာရာကိုခက်ခဲစေမည့် eReader တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်စတိုးဆိုင်များလျှော့ချခြင်းနှင့် ebook catalog နှင့်အတူ eReader အသစ်၏အောင်မြင်မှုသည်ရှုပ်ထွေးသည်။ မထင်ဘူးလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » hardware » စာဖတ်သူများ » NOOK GlowLight3တတိယအကြိမ်အနိုင်ရပါသလား။
Tolino Epos သည်အဆင့်မြင့် eReaders အတွက်ဂျာမန်ရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်